Damiirka Doorasho Abaareed: Qore Xuseen Jaamac
Saturday January 07, 2017 - 11:39:12 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Salaan ku socota Hawl-wadeenada Shabakadan Wararka iyo Akhristayaasha Sharafta leh.
Doorshada waxaa loogu talogalay in aynu iska soo dhex xulno hogaamiyaha ugu haboon. Waqtiga Doorashaduna waa waqti Saamaxaya in ay suuragal u noqoto ka qaybgalka Tirada ugu badan ee Shacabka wax dooranaya.
1. In Waqtiga ay dhacayso doorasho dib loo dhigaa, hadii aanay jirin Sabab Distooriya, waa duudsiga xaqa Doortaha iyo La Doortahaba.
2.Sidaa si lamid ah, hadii doorasha la qabto waqti ay jirto Sababaha kalifaya in Doorashada dib loo dhigo sida colaadaha iyo Abaaraha,waa Dulmi iyo Duudsi Xaqa Doortaha iyo la doortahaba.
Abaartii kal hore (2016) ee ku habsatay Gobolada Galbeedka, waa hakisay diiwaangelinta Gobolada qaar sida Maroodijeex, iyadoo Madaxweynaha Qaranku u adkaysanwaayay in ay isbarbar-socdaan hawlaha gurmadka Abaaraha iyo Diiwaangelinta Doorashada.
Abaarta Jiilaalkan adag ee Saameysay Gobolada Bariga, Badhtamaha Degmooyin ka mid ah Gobolada Galbeed, Waxaa lagu tilmaamaa inay tahay Abaartii ugu darnayd ilaa waqtigii Abaartii Daba-dheer.
Sida ku xusan Dastuurka Somaliland Sabaha keenikara dib-u-dhaca doorasho waxaa ka mid ah Abaar baahsan, Sida aan kor kusoo sheegay, Abaar tan ka daran oo Doorasho dib-u-dhigikartaa lama garanayo.
Imisa Kun oo qof oo xaq u leh in ay codeeyaan ayaa seegaya Maalinta doorashada Sababahaas jira awgeed. Bal waraysta Shacabkii degenaa degmooyinka Gar-Adag, Ceel-Afweyn, Caynaba, Xudun, Taleex, Balligubadle, Sallaxley, Oodweyne, iyo Burco.
Dadkii degmooyinka Barigu waxaa u hayaameen Degmooyin ka tirsan Gudaha Puntland sida Garoowe iyo Qardho, halkii degmooyinka kale sida Burco, Oodweyne, Sallaxley iyo Balligubadle ay u hayaameen Degmooyinka Gabiley, Dila iyo Boorame iyo qaar u talaabay Dhinaca Itoobiya.
Iyadoo waxaas oo dhan ay jiraan , hadana Masuuliyiin iyo "Siyaasiyiin" badan, ayaa u sacabo tumaaya Doorashada Waqtigan Abaarta lagu jiro. Kuwaasi waxay u badanyihiin kuwii shalay Abaartii kal hore Codsaday in dib loogu dhigo Diiwaangelinta Maroodijeex, Madaxweynuhuna ka aqbalay. 3 bilood oo korodhsiimo ah ayuu u samri la'yahay Musharaxa Muxaafidku halka Madaxweyne Siilaanyo usoo samray 3 sano oo korodhsiimo ah waqtigii UDUB.
Danaysiga Siyaasadeed ee ilaa heerkaas ahi waxaa lagu tilmaami karaa Wadaniyad-la'aan, iimaan-beel kursi iyo Ciirsi-taagwaa.
Raxmada Eeebe Alle ha inoo soo dedejiyo.
"Damiirkuna ha shaqeeyo."